Yaa yihiin dad asal ah oo Mareykan ah?
Taariikhda & Dhaqanka Taariikhda Ameerikaanka ah
Waa kuwee dadka Maraykanka ah?
Baro Dhaqanka Ameerikaanka ah
Weydii dadka intooda badan inay u malaynayaan inay yihiin dadka Asaliga ah oo ay u badan tahay inay yiraahdaan "waa dad Hindi ah." Laakiin waa kuwee Hindida Maraykanka, iyo sidee ayaa loo go'aamiyey? Kuwani waa su'aalo aan wax jawaab ah oo sahlan oo sahlan iyo isha laga helayo khilaafaadka joogtada ah ee ka jira beelaha Mareykanka, iyo sidoo kale hoolalka Congresska iyo hay'adaha kale ee dawladda Mareykanka.
Qeexidda "Indigenous "
Qofku wuxuu qeexayaa asal ahaan sida "asal ahaan iyo dabeecad ka mid ah gobol ama waddan gaar ah; hooyo." Waxay ku saabsan tahay dhirta, xayawaanka iyo dadka. Qof (ama xayawaan ama dhirta) waxay ku dhalan karaan gobo ama waddan, laakiin ma ahan kuwo asal ah haddii ay awoowayaashood aysan ka soo bixin. Forum-ka joogtada ah ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan Arrimaha dadka asaliga ahi waxay tilmaamaysaa dadyowga asaliga ah sida dadka:
Is-aqoonsiga asal ahaan asalka ah ee heer shakhsiyeed waxaana lagu aqbalaa bulshada sida xubinimadooda.
Sii joogtaynta taariikheed ee horey ujeedka gumeysiga iyo / ama jaaliyadaha ka hor
Xiriir xoog leh ku leh dhulalka iyo ilaha khayraadka dabiiciga ah
Muuji nidaamyo bulsheed, dhaqaale ama siyaasadeed oo kala duwan
Luqad kala duwan, dhaqan iyo aaminaad
U samee kooxo aan dad-weyneeyn
Xalliyaan si ay u sii wadaan oo ay dib ugu soo celiyaan deegaanadooda iyo nidaamyadooda sida dad iyo bulshooyin kala duwan.
Ereyga "indigenous" waxaa badanaa loo yaqaanaa caalamka iyo dareenka siyaasadeed, laakiin dadka intooda badani dhalashadiisu waxay ku dhaqmayaan ereyga si ay u qeexaan "asal ahaan," mararka qaarkoodna loo yaqaan "cidhiidhigooda". Inkasta oo Qaramada Midoobay ay aqoonsan tahay is-aqoonsiga mid ka mid ah calaamad muujin la'aanta ah, Maraykanka oo kaliya is-magaciisa kaliya kuma filna in loo aqoonsado Hindida Mareykanka ee ujeedooyinka aqoonsi siyaasadeed rasmi ah.
Markii ay degenayaashii Yurub ee ugu horeeyay waxay yimaadeen xeebaha Hindiya oo loo yaqaan "Turtle Island" waxaa jiray kumanaan qabiil iyo kooxo asal ah. Tiradooda ayaa si aad ah hoos loogu dhigay sababtoo ah cudurrada shisheeye, dagaallada iyo siyaasadaha kale ee dawladda Mareykanka; qaar badan oo ka mid ah kuwaas oo sii waday xiriirka rasmiga ah ee Maraykanka iyadoo la marayo heshiisyada iyo hababka kale.
Qaar kale ayaa sii waday laakiin Maraykanku wuu diiday inuu aqoonsado iyaga. Maanta mareykanka ayaa si gooni ah u go'aaminaya cidda (qabiilka) waxa ay samaysaa xiriir rasmi ah iyada oo loo marayo habka aqoonsiga federaalka. Hadda waxaa jira qiyaastii 566 qabiillada federaalka ah ee la aqoonsan yahay; waxaa jira qabiillo qaarkood oo leh aqoonsi dawladeed balse aan lahayn aqoonsi federaal ah iyo waqti kasta oo la siiyo waqtiyo ay jiraan boqollaal qabiil oo weli ku jira aqoonsi federaal ah.
Sharciga Federaalku wuxuu qirayaa in qabaa'ilka ay leeyihiin awood ay ku go'aamiyaan xubinimadooda. Waxay isticmaali karaan wax kasta oo macnahoodu ay tahay inay jecel yihiin inay go'aansadaan qofka xubin ka noqda. Sida laga soo xigtay Aqoonyahanada Eva Marie Garroutte buugeeda " Real Indians: Aqoonsiga iyo Badbaadinta Qaranka Ameerika ", qiyaastii laba meelood labo meel oo qabiil ah waxay ku tiirsan yihiin nidaamka dhiigga ee dhiigga kaasoo go'aamiya lahaanshaha ku salaysan fikradda jinsiyada adoo cabira sida ugu dhow ilaa "aabe" oo ah "full-blood" aabaha Hindida ah.
Tusaale ahaan, dad badan ayaa leh shuruud ugu yar oo ah ¼ ama ½ heerka dhiigga Hindida ee xubinimada qabaa'ilka. Qabiilada kale waxay ku tiirsan yihiin nidaam caddayn ah oo ka soo baxa xariijinta.
Kordhinta nidaamka dhiigga ee dhiigga ayaa lagu dhaleeceeyay in uu yahay hab aan ku filneyn oo dhib ah oo lagu ogaanayo xubinimada qabaa'ilka (iyo sida aqoonsiga Hindida). Sababtoo ah Hindida ayaa guursaday in ka badan mid kasta oo ka mid ah Mareykanka, go'aaminta qofka Hindida ku salaysan heerarka jinsiyaddu waxay keenaysaa waxa culimadu ku magacaabaan "xasaasiyadda tirakoobka." Waxay ku doodaan in Hindida ay ka badan tahay qiyaasta jinsiyada; waa wax badan oo ku saabsan aqoonsiga ku saleysan nidaamyada qaraabada iyo kartida dhaqanka. Waxay sidoo kale ku doodayaan in qiyaasta dhiigga ay tahay nidaam lagu soo rogo xukuumadda Mareykanka, mana aha habka dadka asaliga ah ee naftooda loo isticmaalo si loo go'aamiyo lahaanshaha, sidaa daraadeed nacaybka dhiigga ayaa ka dhigan inuu ku soo noqdo hababka dhaqameed ee lagu daro.
Xitaa iyada oo leh awoodda qabaa'ilka si ay u go'aamiyaan xubinnimadooda, go'aaminta cidda si sharci ah loogu qeexay Hindida Maraykanka weli wali maaha goyn. Garroutte wuxuu qorayaa in aysan jirin wax ka yar 33 qeexitaan qeexan oo qeexan. Tani waxay ka dhigan tahay in qof lagu qeexi karo Hindida mid ujeedo leh, laakiin maaha mid kale.
Dareenka sharciga ah ee dadka Asalka ah ee Hawaiian looma tixgeliyo dadka Asaliga ah ee Maraykanku sida Maraykanka Indiya u yihiin, laakiin waxay yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Maraykanka (magacooda naftooda waa Kanaka Maoli). Xadgudubka sharci-darrada ah ee boqortooyada Hawaiian ee 1893-kii ayaa ka tagay khilaafaad badan oo ka dhexjirta dadweynaha Native Hawaiian iyo dhaqdhaqaaqa madax-bannaanida ee Hawaiian oo bilaabmay 1970-kii wuxuu ka yaraa midnimo oo ka hadlaya sida ay u aragto habka ugu wanaagsan ee caddaaladda. Akaka Bill (oo uu soo maray dhowr shirar oo ka dhacay Kongares muddo 10 sano ah) wuxuu soo jeedinayaa in la siiyo dadka reer Asaliga ah ee isla kuwa asal ahaan ka soo jeeda Maraykanka, si wax ku ool ah ugu beddelaan Hindida Maraykanka marka loo eego dareen macquul ah iyaga oo u hoggaansan nidaam sharciyeed oo ah Native American waa.
Si kastaba ha ahaatee, aqoonyahannada dhalashada ee Hawaiian iyo dhaqdhaqaaqeyaashu waxay ku doodaan in tani ay tahay hab aan habbooneyn oo loogu talagalay Native Hawaiian sababtoo ah taariikhdooda waxay si aad ah uga duwan yihiin Hindida Maraykanka. Waxay sidoo kale ku doodaan in sharcigu uu ku fashilmay in uu si wanaagsan ula tashado Native Hawaiian wixii ku saabsan rabitaankooda.
Dagaalka Faransiiska iyo Indiya: Xeebta Fort William Henry
Qormo Xogta Siyaasadda Dhaqanka ee Dawlada Dhexe
Todoba Sano Dagaal: Dagaalkii Plassey
Faransiiska & Hindiya / Todoba Sano Dagaal: 1760-1763
Qoob ka ciyaarka Asaasiga ah ee Mareykanka: Regency of Powwow
Addoonsiga iyo Aqoonsiga Ka mid ah Cherokee
Qoob ka ciyaarka Native American Orientation
Maxay Tahay Dhaqanka (Christian) Discovery?
4 Xaqiiqda ku saabsan Booqashada Aasaasiga ah ee Maraykanka
Taariikhda ku xigtay Case Cobell
Dagaalka Faransiiska iyo Dagaalka: Dagaalkii Quebec (1759)
Nolosha Powhatan Hindiya Pocahontas
Mary iyo Martha: Sheekada Kitaabka Quduuska ah
Waa maxay sababta Jimcaha 13-keeda loo aqbali-waayey?
6 Sababaha Xiriirka Xirfadlayaasha Isboortiga Toughest Waa Jid
Dagaalkii Dunida II: General Jimmy Doolittle
Isticmaalka Verb 'Gustar'
Faransiiska iyo Hindiya / Toddobaad Sannad Dagaal
Dyuktai Cave iyo Complex - Kacdiyeyaasha Siberian ee Ameerika?
Dagaalkii Dunida II: Dagaalkii Guadalalaha
Maxay tahay macnaha "Pie American" (Cunto Sare) "Cunto"?
Qeexitaan aan jirin, Ilaah la'aan
Si sahlan u Hubi Saliiddaada
Qeexitaanka Dhaqanka Macmiilka
Xaqiiqooyin ku saabsan Baboquivari Peak
Qaamuuska ciyaaraha ee ciyaaraha iyo sheekada doodda
Sheekada 'Pine Tree' '- Hans Christian Andersen
Isaga - "wada noolaansho" - astaamaha dabeecada Shiinaha
Yaa Dayriyey Maalinta Aabbayaasha?
40-ta Haweenayda Bushka Bushka ah ee Wakhtiga oo dhan
Muusikada qadiimka ah ee dhagaxyada ee Christmas
20 Jacaylka Looga Helay Sawirada Xayawaanka
McDonald's Fries Faransiis Weli Wali Ma cunin